C/wali Sheekh Axmed Ayaa Kahadlay waqtiga Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh – STAR FM SOMALIA
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed ayaa ugu baaqay Madaxweynaha inuu kursiga banneeyo, iyadoo maanta ay ku eg tahay muddo xileedkiisa sharciga ah, afar sano kadib markii loo doortay Xilka Madaxweynaha.
C/wali Sheekh Axmed oo ay isku dhaceen Madaxweyne Xasan Sheekh, xilligii uu ahaa Ra’iisul Wasaare ayaa hada h0r-boodaya Musharaxiinta Mucaaradka ee ku sugan Muqdisho.
“Madaxweynaha waqtiga waa kaa dhamaaday, mana aanan ogin qaab sharciyeed oo aad kursiga ku sii joogi karto, Xasan Sheekh wey kaa dhamaatay waqtigii dadka Soomaaliyeed ku jaan-gooyeen inaad maamusho dadka ama aad hoggamiso, hada waxaa ka mid tahay Musharaxiinta”ayuu yiri C/wali Sheekh Axmed.
C/wali Sheekh Axmed ayaa ugu baaqay Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday inuu ka soo baxo Villa Somalia, isla markaana wareejiyo baabuurta aan xabada karin ee Bullet Proof-ka, isagoo xusay inuu wixii hada ka dambeeya la mid yahay dadka kale ee musharaxiinta.
Musharaxiinta Mucaaradka ayaa soo jeediyay in xilka Madaxweynaha si KMG loogu dhaariyo Guddoomiyaha Baarlamaanka ee waqtigiisa dhamaaday, sidoo kale waxaa ay ku baaqeen in Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid oo isna Musharax ah inuu xilka ku wareejiyo Ra’iisul Wasaare kuxigeenka.
Ugu dambeyn xubnaha Musharaxiinta iyo Xisbiyada siyaasada ayaa sheegay inay dacwad ka gudbin doonaan Madaxweyne Xasan Sheekh, hadii uusan xilka wareejin, iyadoo Madasha Wada-tashiag qaran ay bishii hore go’aamiyeen in Madaxda dowladda ee waqtigoodu dhamaaday ay xilka sii heynayaa illaa 30 October.